caafimaadka - UNHCR Egypt
Haddii aan ka shakiyo in aniga/wiilkayga/ninkayga/xaaskayga uu qaaday cudurka Coronavirus, maxaan sameeyaa?
Wasaaradda Caafimaadka iyo Dadweynaha ee Masar waxay dejisay khadka telefoonka (dial 105) ee su’aalaha ku saabsan coronavirus-ka cusub iyo codsiyada gargaarka caafimaadka Masar oo dhan.
Waxaan guriga la wadaagaa qoys kale oo aan ka shakisan yahay inuu qaaday cudurka 'coronavirus' laakiin ma awoodaan inay is karantiilaan/ diidaan inay caawiyaan. Maxaa samayn karaa?
Waa inaad wacdaa khadka caawinta ee Wasaaradda Caafimaadka (105) si aad talo uga raadsato iyo/ama ugu wargeliso kiiskooda.
Dhanka kale, waxaa lagugula talinayaa inaad ka ilaaliso guriga oo dhan sida ugu macquulsan.
Haddii waji-xidho laga helo guriga, weydii qofka looga shakisan yahay inuu qaaday COVID-19 inuu xidho maaskaro ilaa ay ka caawinayso MoHP
Markaad iska bixinayso maaskarada, weydii qofka jirran inuu ka saaro maaskarada xargaha dambe si aad uga fogaato wasakheynta gacmaha bukaanka oo si nadiif ah u tuur adigoo gelinaya dambiisha qashinka adag ee dabool leh.
Haddi aysan jirin waji-xidho, bukaanku waxa uu isticmaali karaa warqad cad si uu u daboolo wajigiisa mar kasta oo ay u baahdaan in ay qufacaan ama hindhisaan. Bukaanku waxa uu u baahan yahay in uu cadka hor dhigo sankiisa iyo afkiisa.
Ka saar warqadda nudaha si la mid ah sida maaskarada oo kale adigoo ku ridaya dambiisha qashinka adag ee dabool leh.
Waxaad u baahan tahay inaad naftaada ilaaliso adigoo xidha maaskaro haddii la heli karo haddii/inta aad daryeelayso qofka jirran. Hubi inaad iska tuurto maaskarada si badbaado leh adiga oo gelinaya dambiisha qashinka adag ee dabool leh.
Haddii aysan jirin waji-xidho, fadlan iska hubi in aad ka fogaato in ka badan 1 mitir qofka jirran si haddii isaga/ay u hindhiso ama u qufacdo, dhibcuhu aanay u gaadhin sankaaga, afkaaga iyo indhahaaga.
Hubi inaad si joogto ah gacmahaaga ugu dhaqdo saabuun iyo biyo. Haddii aad leedahay nadiifiyaha alkohol-ku-salaysan, kuwan sidoo kale waa la isticmaali karaa.
Hubi jeermi-dilista joogtada ah ee sagxadaha, sagxadaha adag ee loo isticmaalo cuntada iyo meel kasta oo kale oo aad si joogto ah gacantaada ugu taabato biyo, saabuun ama jeermis-dileyaal.
Waa maxay tillaabooyinka/ taxaddarrada gaarka ah ee ay tahay in aan qaado haddii aan iska tijaabiyo COVID-19?
Muwaadiniinta, magangelyo-doonka, qaxootiga iyo soo-galootiga dhammaan si isku mid ah waxay heli doonaan isla tillaabooyinka caafimaadka Dadweynaha ee ay uga baahan tahay jawaab-celinta COVID-19 heer qaran. Tani waxay ka dhigan tahay in tillaabooyinka lagu hubinayo in qofka la xaqiijiyey inuu ku dhacay COVID-19 iyada oo aan loo eegin xaaladdeeda sharci ay ka heli doonto daryeelka Wasaaradda Caafimaadka isbitaalka haddii ay dhacdo astaamo caafimaad.
Tallaabooyinka noocan oo kale ah ayaa laga yaabaa inay u baahdaan karantiil ilaa daryeelka la dheereeyey iyo shaybaadhka shaybaadhka ay xaqiijinayaan in qofku ka adkaaday cudurka oo uu ka bixi karo karantiilka.
Tallaabooyinka Wasaaradda Caafimaadka waxay sidoo kale hubin doontaa in dhammaan xiriirada qofka la xaqiijiyey inuu ku dhacay COVID-19 sidoo kale la qiimeeyay, la tijaabiyey lana arkay inta lagu jiro muddada fayraska COVID-19 ee kala duwan oo u dhexeeya 2-14 maalmood. Haddii ay ka xoroobaan caabuqa COVID-19, waxay dib u bilaabi doonaan noloshooda caadiga ah halka haddii laga helo baaritaanka togan isla tillaabooyinka daryeelka iyo karantiil ayaa la qaadi doonaa ilaa baaritaanku xor noqdo oo muujinaya in qofku ka adkaaday cudurka oo uu sidoo kale dib u bilaabi karo nolol caadi ah.
Haddii aad la kulanto dhibaato gaar ah ama isbeddel, fadlan u sheeg UNHCR khadka telefoonka ama la-hawlgalayaasha caafimaadka.
Waxaa ii diiday adeegyada xarumaha caafimaadka dadweynaha sababtoo ah waxaan waayay kaarka UNHCR/maxaa yeelay wuu dhacay. Maxaa samayn karaa?
Xarumaha caafimaadka dadweynaha sida Wasaaradda Caafimaadka xarumaha caafimaadka aasaasiga ah ma eegaan kaararka UNHCR si ay u bixiyaan adeegyada daryeelka caafimaadka aasaasiga ah oo la mid ah waxay khuseeyaan adeegyada qolka gurmadka ee Wasaaradda Caafimaadka.
Haddii ay dhacdo in aad la kulanto xaalad degdeg ah oo u baahan isbitaal oo aad haysato kaarka UNHCR ee dhacay/ay kaa luntay kaarkaagii, la-hawlgalayaasha UNHCR ee Save the Children ayaa ku taageeri doona si aad u hesho daryeelka cusbitaalka iyada oo adeegsanaysa shabakadeeda qandaraas ee isbitaallada.
Caritas ama urur kastaa ma bixiyaa agabka nadaafadda ama xirmooyinka nadaafadda si ay nooga caawiyaan inaan ilaalino?
Wada-hawlgalayaasha hadda ma qaybiyaan nadiifiyeyaasha. Haddii la-hawlgalayaasha ay bilaabaan bixinta adeeggan, waa lagu wargelin doonaa.
Dhanka kale, waxaa lagugula talinayaa inaad haysato jeermiska saabuunta iyo sagxada gurigaaga oo laga heli karo gurigaaga.
Xaggee dadku aadi karaan si ay isaga baadhaan haddii ay rabaan inay raadiyaan dammaanad ah in aanay qaadin fayraska? Iyo kharash intee le'eg?
Wasaaradda Caafimaadka iyo Dadku waxay u qoondaysay taleefoon (105) qof kasta oo ku nool Masar oo ay ku jiraan magangalyo-doon iyo qaxooti si ay talo uga raadsadaan COVID-19. Haddii qof kasta oo ay khusayso uu ka shakiyo inuu ku dhacay fayraska ama uu leeyahay calaamado hargab ah oo ay ka shakiyaan inay xidhiidh la leeyihiin COVID-19.
Wasaaradda Caafimaadka iyo Dadweynaha ayaa sidoo kale magacawday 28 isbitaal oo bixiya qiimeyn iyo daryeel la xiriira COVID-19. Qiimaynta iyo daryeelka COVID-19 waa lacag la’aan.
Haddii qof uu la ildaran yahay xaalad caafimaad oo halis ah, miyay u baahan yihiin inay cusboonaysiiyaan kaararkooda si ay u helaan adeegyo caafimaad?
Hagidda waxaa la siiyay UNHCR ee fulinta la-hawlgalayaasha daryeelka caafimaadka (Caritas, Refuge Egypt, PSTIC iyo Save the Children) si ay u sii wadaan adeegyadan soo socda oo aysan u joojin iyaga sababtoo ah soo bandhigida kaarka aan dib loo cusboonaysiin ee dhacay oo dhacay hadday tahay magangalyo-doon ama kaarka qaxootiga.:
Daaweynta cudurrada daba-dheeraada
Daryeelka caafimaadka dhimirka ee aasaasiga ah
Daryeelka caafimaadka taranka ee uurka adag
Xaaladaha degdega ah iyo adeegyada kale ee daryeelka gudbinta ee xaaladaha halista ah ee halista ah.
Adeegyadan waxa kale oo loo fidiyaa dadka sita warqadaha iyo shahaado magangalyada marka ay timaado daryeelka caafimaadka degdega ah iyo daryeelka maskaxda ee degdega ah iyada oo aan loo eegin in warqada balantu ama shahaadooyinkani dhacay. Waxa kale oo la siiyaa shahaado magangalya doonka daawaynta cudurada raaga iyada oo aan loo eegin in shahaadooyinkani dhacay iyo in kale.
Waa maxay sababta UNHCR aysan ula heshiin bixiyeyaasha adeegga gaarka ah baaritaannada/daawaynta corona iyadoo la eegayo caqabadaha la yaqaan ee ay qaxootigu kala kulmaan isbitaallada dadweynaha?
COVID-19 waa jawaab-celin dawladeed oo ay Wasaaradda Caafimaadka iyo Dadku ku kalsoon yihiin shaybaarada ay ku fuliyaan baaritaanka xaqiijinta cudurka iyo tillaabooyinka caafimaadka dadweynaha, daryeelka ama tillaabooyinka karantiil si isku mid ah ayaa loogu bixiyaa muwaadiniinta, qaxootiga, magangalyo-doonka, muhaajiriinta iyo qof kasta oo ku nool Masar . UNHCR waa in ay u hoggaansanto qorshaha jawaabta gobolka oo ay hubiso in si siman loogu galo.
Intaa waxaa dheer, tas-hiilaadka gaarka loo leeyahay ma laha tillaabooyinka caafimaadka guud ee loo baahan yahay iyo jawaabta daryeelka ee cudurkan. Sidaa darteed, UNHCR waxa ay u hoggaansami doontaa oo keliya Ururka Caafimaadka Adduunka iyo Wasaaradda Caafimaadka iyo Dadweynaha oo ay hoggaaminayso oo ay hagayso jawaabaha qaran ee ku aaddan maaraynta masiibada.
Sidee bay bulshooyinku kor ugu qaadi karaan wacyiga ku saabsan COVID-19 marka aan loo ogolayn inay qabtaan shirar bulsho iyo kulano la mid ah?
Maamulka Masar ayaa qaaday tillaabooyin taxaddar leh oo ay ka mid yihiin joojinta iskuullada, jaamacadaha, xarumaha dhalinyarada iyo mamnuucidda isu imaatinka ballaaran si loo xakameeyo khatarta gudbinta COVID-19 oo ay uga sii dartay dadka ka agdhow. Sidaa darteed, shirarka bulshada iyo isu imaatinka waa in ay raacaan si waafaqsan tallaabooyinka caafimaadka dadweynaha ee Masar.
UNHCR iyo la-hawlgalayaasheeda ayaa ka dhigay waraaqo wacyigelin ah oo laga heli karo xarumaheeda soo dhaweynta ka hor inta aan la dhimin waxqabadyada, bogagga Facebook ee UNHCR iyo sidoo kale qaar ka mid ah la-hawlgalayaasheeda waxay ku turjumeen waraaqo wacyigelin ah oo ku qoran luqado kala duwan.
UNHCR iyo la-hawlgalayaasheeda ayaa sii wadi doona gudbinta agabka wacyigelinta dheeraadka ah iyadoo la ixtiraamayo Wasaaradda Caafimaadka iyo Tallaabooyinka taxaddarka Dadweynaha ee la xiriira joojinta shirarka iyo isu imaatinka si loo xakameeyo khatarta gudbinta COVID-19.
Waxaad ka heli kartaa dhammaan agabyada luqado kala duwan ku yaal guddiga Trello halkan: https://trello.com/c/KBXVuDwj